राजनीतिभन्दा खेतमा सुहाएका डा. भटराई ( फोटो फिचर ) - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
प्रकाशित : आइतबार, असार १५, २०७६१७:२८ पब्लिक आवाज /संवाददाता
काठमाडौं, १५ असार । आज असार १५ अर्थात मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिन । आजै धान दिवस पनि । किसानहरु अहिले रोपाइमा व्यस्त छन् । अरुबेला राजनीतिले फूर्सद नपाउने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि असार १५ का दिन ‘हली’ को हुलियामा देखिएका छन् ।
त्यहाँ मल्टिपर्पोज कृषि फार्मले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ट्टराईले धान दिवसमा गोरुसँगै दाँदे लगाएका छन् ।
हातमा कोदाली लिएर उनी हिलो खेतमा देखिएका छन् । ट्वीटरमा उनले धान दिवसमा आफ्नो सहभागिताका केही तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिऔं, स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरौं । कृषिमा आत्मनिर्भर बनौं ।’
आहाराको खोजी गर्दै मयुर
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङस्थित बुद्धमूर्ति स्थलमा तस्वीर खिचाउँदै